အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို အသက်တိုစေတတ်သည့် အရေးကြီးသောအမှား(၁၂) ချက် - ONE DAILY MEDIA
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို အသက်တိုစေတတ်သည့် အရေးကြီးသောအမှား(၁၂) ချက်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်နှစ်သက်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန် ကြိုးစားကြရပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှန်ကန်သောအချက်အလက် အားလုံးမရှိသောကြောင့်မကြာခဏအမှားလုပ်မိတတ်ပါတယ်။ မသင့်လျော် မမှန်ကန်သော စောင့်ရှောက်မှုသည် ရောဂါများကဲ့သို့သော ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တိရစ္ဆာန်များနှင့် ပိုင်ရှင်များအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ တိရိစ္ဆာန်များကို အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များ အမှန်တကယ်မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည့်အမှားများကို ရှာဖွေစုစည်းထားပါတယ်။
အမှား ၁။ ။ကြောင်များကို အစာခြောက်နှင့် အသားများကို တစ်ချိန်တည်းကျွေးခြင်း
အစပိုင်းတွင် သင့်ကြောင်ကို သင်ကျွေးမည့်အရာကို ကြောင်စာ‌ခြောက် သို့မဟုတ် သဘာဝအစားအစာကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သဘာဝအစားအစာကို ရွေးချယ်ပါက သင်ကျွေးနိုင်သော အစားအစာများ စာရင်းကို ကျွမ်းကျင်သော တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ရေကို တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပြောင်းလဲရန် မမေ့ပါနှင့်။ ကြောင်များသည် ရေဓါတ်ရှိနေရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ကြောင်အစာခြောက် သို့မဟုတ် စည်သွပ်ဘူးခွံများကို ကျွေးပါက အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖတ်ပါ။ အစားအစာတွင် အနံ့အရသာရှိသော အရာများ ၊ ပြောင်း၊ သို့မဟုတ် GMOs မပါဝင်ပါက ပိုကောင်းပါတယ်။ ကြောင်စာရှိ အသားနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏ အချိုးအစားကိုလည်း အာရုံစိုက်သတိပြုပါ။
သဘာဝအစားအစာကို ကျွေးမည်ဆိုပါက ကြောင်များအတွက် ကျွေးသင့်သည့် အစားအစာများကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။
-ချက်ပြုတ်ထားသော အမဲသား၊ ကြက်သား
– စည်သွပ်ဘူး သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ထားသော ငါးအနည်းငယ် ငါးစိမ်းများကို ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းကောင်းမစားပါ။
– ချက်ပြုတ်ထားသော ဥ များကျွေးပါ။အစိမ်းများ မကျွေးပါနဲ့။
ကြောင်များအတွက် ခွင့်မပြုသော အစားအစာများ
– တူနာငါးများ အလွန်အကျွံစားပါက အာဟာရချို့တဲ့မှု သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်မှုများဖြစ်စေပါတယ်။
– ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နှင့် ငရုတ်သီးများက သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်
– ကြောင်များဟာ Lactose ဓာတ်မတည့်မှုရှိတာ‌ ကြောင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် လုံးဝမတည့်ပါဘူး
– အရက် ၊ စပျစ်သီး‌ခြောက် နှင့်စပျစ်သီးများ ၊ ကဖိန်းဓာတ်နှင့် ချောကလက်များလည်း မတည့်ပါဘူး
အမှား ၂။ ။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက် လျော့နည်းစေကာ ပြသပါ
ဤအရာသည် အချို့သောရောဂါများကို ရှောင်ရှားရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သောပါတယ်။၎င်းသည် အချို့သောရောဂါများကို ရှောင်ရှားရန် သို့မဟုတ် တွေ့ရှိပြီး အချိန်မီကုသနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဖြစ်များဆုံးရောဂါများအတွက် သင့်ကြောင်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့် သင့်ကြောင် တင်သာမက သင့်ကိုယ်သင် လည်ူဘေးကင်းစေမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်သည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်သည့်အခါ ၎င်း၏ ID ကို ရယူရန် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို စာရင်းသွင်းရပါတယ်။ ၎င်းသည် ဘဝ၏ အ ရေးးကြီးဆုံးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ တိရစ္ဆာန်တိုင်းတွင် ID ရှိသင့်ပါတယ်။
အမှား ၃။ ။ဖွင့်ထားသော ပြတင်းပေါက်ဘေးတွင် ကြောင်ကို ထားခဲ့ခြင်း
၎င်းတို့၏ ဗီဇအတိုင်း ငှက်တစ်ကောင်ကို ဖမ်းရန် ကြိုးပမ်းရင်း ဖွင့်ထားသော ပြတင်းပေါက်မှ ခုန်ချသော ကြောင်များစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အနည်းငယ်မျှသာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အန္တရာယ်မပြုဘဲ နေသော်လည်း ကြောင်အများစုသည် ၎င်းတို့၏ခြေသည်းများ၊ ကျောရိုးများကျိုးကာ ကာ သေဆုံးသည်အထိပင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် မည်သည့်ပြတင်းတံခါးကိုမျှ ဖွင့်မထားပါနှင့်။
အမှား 4။ ။ပိုးသတ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
ဒါဟာ အန္တရာယ်လုံးဝကင်းပြီး မေ့ဆေးဖြင့် ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ခြင်းက တိရစ္ဆာန်များ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။အမှန်တကယ်ပင် ၎င်းတို့သည် အသက်ရှည်၍ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားလာကြစေပါတယ်။သို့‌ သော် ကြောင်များစွာဟာ ပျင်းရိလာပြီး ပေါင်ချိန်ပိုတက်လာသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ပိုတက်နေခြင်းမှာ သင်သတိပြုသင့်သည့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့စားသည့်အရာကို အမှန်တကယ် သတိထားသင့်ပါတယ်
သင်းကွပ်ခြင်းက ကျယ်လောင်စွာ အော်သစ်ငေါက်ငမ်းခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး သင့်ကြောင်ကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှား ၅။ ။အမွှေးအမျင်များနှင့် သွားကိုမသန့်ရှင်းပေးခြင်း
သင့်ကြောင်တွင်ရှိသော အမွေးများကို မည်ကဲ့သို့ ပြုစုမည်နည်း ?? စည်းမျဉ်းများကို သိထားသင့်ပါတယ် ။ စည်းမျဉ်းများသည် မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါတယ်- ဥပမာ အမွှေးမရှိသောကြောင်များကို မကြာခဏ ဆေးကြောသန့်စင်သင့်ပါတယ် ။ အမွေးတိုသောကြောင်များသည်လည်း ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး အမွေးရှည်ရှိသော ကြောင်များကို မကြာခဏ
သူတို့၏ အမွှေးများကို ကောင်းစွာဂရုမစိုက်ပါက အမွေးရှည်ရှိသောကြောင်များအတွက် အရေပြားရောဂါများ သို့မဟုတ် မလန်းဆန်းခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အနည်းဆုံး ၆ လတစ်ကြိမ်၊ ကြောင်များကို ကပ်ပါးကာကွယ်ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်‌ ပေးသင့်ပါတယ်။
အမှား ၆။ ။သင့်စားပွဲမှ အစားအသောက်များကို သင့်ခွေးများအား ကျွေးခြင်း
သင့်စားပွဲမှ အစားအစာများကို ခွေးများကျွေးခြင်းဟာ လုံးဝမသင့်တော်သော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များက ဖော်ပြပါတယ်။ လူနှင့် ခွေးတို့၏ အစာအိမ်နှင့် အစာပြွန်သည် လုံးဝကွဲပြားပြီး အစာအိမ်အရည်များသည်လည်း ကွဲပြားပါတယ်။ ခွေးများ၏ အစာခြေစနစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့စားသော အစားအစာအများစုကို မကိုင်တွယ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ခွေးအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သင့်အစားအစာဖြင့် မဖော်ပြဘဲ ၎င်း၏အစားအသောက်ကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ပိုကောင်းပါတယ်။
ခွေးများအတွက် ကောင်းမွန်သော အစားအသောက်များတွင် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ အသားစိမ်းများနှင့် အိုမီဂါ-၃ fatty acid ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ချိုသောအသီးအနှံများကို လည်း ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
အမှား ၇။ ။ဦးခေါင်းကို ဆေးကြောပြီး သွားနှင့်ခံတွင်း စောင့်ရှောက်မှုကို ရှောင်ပါ။
ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခြင်းဟာ ရောဂါများကာကွယ်ခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးလုံးတွင် သဘာဝအတိုင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်ထူသောနေရာ၌ လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် သင့်ခွေးကို ညစ်ပတ်နေမှသာ ဆေးကြောခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ သင့်ခွေးသည် စိုစွတ် အေးမြကာ တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ရေချိုးပြီးခါနီးတွင် ခွေးခေါင်းကိုပါ အမြဲဆေးကြောသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် သင့်ခွေး၏ သွားများကျန်းမာရေးကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ ခေါ်သွားသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏သွားများ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန် ဆရာဝန်ကို တောင်းဆိုပါ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးတွင် အထူးသွားတိုက်တံနှင့် သွားတိုက်ဆေးကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပုံမှန်သွားဘက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကို စတင်နိုင်ပါတယ်။
အမှား ၈။ ။ ခွေးတစ်ကောင်ကို လုံလောက်တဲ့ ဂရုစိုက်မှု နဲ့ မေတ္တာမပေးမိခြင်း
ခွေးများသည် ကြောင်များနှင့်မတူဘဲ၊ လူမှုရေးခံစားတတ်‌သော တိရစ္ဆာန်များဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က မင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ တောင့်တပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင် ခွေးများသည်လည်း ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများကို မှန်ကန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်ပါတယ် ။ သို့မဟုတ်ပါက သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည် မကြာမီ အလွယ်တကူ ကြောက်လန့်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်းနှင့် နာခံမှုမရှိခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် အိမ်အပြင်ဘက်တွင် အချိန်လုံလောက်စွာပေးခြင်းက သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အမှား ၉။ ။လမ်းထွက်မလျှောက်မီ ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်ကို မစစ်ဆေးမိခြက်း
အဓိကစည်းမျဉ်းကတော့ သင့်ခွေးကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေသင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်အတွက် အောက်ပါ အတိုင်းအတာများကို သတိထားသင့်ပါတယ်- ခွေးလတ်မှ အကြီးများအတွက် လည်ပင်းနှင့် လည်ပတ်ကြားတွင် လက်ချောင်း ၂ ချောင်း (ခွေးငယ်များအတွက် လက်တစ်ချောင်း) ရှိရပါမယ်။ လည်ပတ်က အရမ်းကြပ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ခွေးကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး ချောင်လွန်းရင်လည်း သင့်ခွေးက သင့်ဆီကနေ ထွက်ပြေးသွားနိုင်တာကြောင့် ဒီစည်းမျဉ်းကို သေချာလိုက်နာပါ။ ၎င်းတို့၏ကြီးထွားမှုနှင့် အလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ လည်ပတ်အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲရန် မမေ့ပါနှင့်။
အမှား ၁၀။ ။ ခွေးကို တိုက်ခန်းထဲတွင် အချိန်အကြာကြီး ပိတ်ထားခဲ့ခြင်း
အသက်အရွယ်အားလုံးနှင့် မျိုးစိတ်အားလုံးသော ခွေးများဟာ လေကောင်းလေသန့်အတွက် အချိန်အလုံအလောက်ရှိသင့်ပါတယ်၊၊ သို့မှသာ များများလှုပ်ရှားနိုင် ၊ အခြားခွေးများနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း လွတ်လပ်စွာလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းတို့တွင် လုံလောက်သော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိပါက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သင့်ပရိဘောဂများကို ပျက်စီးစေမည့် စွမ်းအင်များရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုများစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ကောင်းတိုင်း အကြာကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ်တွင် သင့်ခွေးသည် အိပ်ပျော်သွားဖွယ်ရှိပါတယ်။
ငှက်များကို လှောင်အိမ်ထဲတွင် အမြဲထားနေခြင်း– အန္တရာယ်ကင်းသော ပျံသန်းမှုအတွက် လုံလောက်သောအချိန်နှင့် လုံခြုံသောနေရာတစ်ခု ပေးသင့်ပါတယ် ၊၊ သို့မဟုတ်ပါက ငှက်သေသွားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်လည်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဖျော်ဖြေမှုအချို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစေ့တွေပဲကျွေးခြင်း — တောရိုင်းများတွင်၊ ကျေးထီးများသည် အစေ့များကို သီးသန့်မစားပါ။ လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ နံနံပင်နှင့် အကိုင်းအခက်များလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအစားအစာသည် ၎င်းတို့အား ကျန်းမာစေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ စိတ်အခြေအနေ တိုးတက်မှုကိုလည်း သင်သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။
ကျေးတမာငှက်များသည် သဲ သို့မဟုတ် ရွှံ့ကို မစားဟုထင်ခြင်း — ဤငှက်များသည် အစာချေဖျက်ရန် အစာအိမ်အက်ဆစ်မရှိပဲရွှံ့စေးလိုအပ်ကြောင်း လူအနည်းငယ်ကသာ သိကြပါတယ်။
ကျေးငှက်တွေကို လုံလောက်တဲ့ အာရုံစိုက်မှု မပေးမိခြင်း — ပိုင်ရှင်များက ၎င်းတို့နှင့် ကစားပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာမှသာ ၎င်းတို့နှင့် စကားပြောဆိုကြပြီး မေ့ နေတတ်ကြပါတယ်။ Parakeets များသည် လူမှုဆက်ဆံ‌ရေးသတ္တဝါများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး မိနစ် 30 ခန့် ကစားခြင်းများနှင့် ဆက်ဆံမှုများ လိုအပ်ပါတယ် ။
ဒေါသဖြစ်ခြင်း — သူတို့ ရန်လိုလျှင် အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင် ရောဂါတစ်ခုခု ခံစားနေရခြင်း သို့မဟုတ် လုံလောက်စွာ ဂရုမစိုက်ခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အာရုံစိုက်မှု မရတာက တကယ်ပဲ ငှက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်မပါဘဲ ငှက်ကို ကုသခြင်း– ထူးဆန်းသော လက္ခဏာများ သတိပြုမိသည်နှင့် တပြိုင်နက် တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ထံ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ဆရာဝန်သည် ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပြီး ဆေးဝါးကို ညွှန်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ကုသရန် ကြိုးစားပါက သေစေနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ကို လက်ဖြင့် ဖမ်းခြင်း — ငှက်တွေ ဒီလိုဖမ်းရင် တကယ်စိတ်ဖိစီးစေပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို သင့်လက်ချောင်းများ သို့မဟုတ် သင့်လက်ဖဝါးပေါ်တွင်သာ တင်ထားသင့်ပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့များသော အခန်း (မီးဖိုချောင် သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းကဲ့သို့) လှောင်အိမ်တွင် ထားပါ။ ထို့အပြင် ၎င်းကို လူများလာရောက်လေ့မရှိသော အခန်းတွင် မထားပါနှင့်။
– ပူးတစ်ကောင်ကို ဝယ်ယူသည့်အခါတွင် သတိထားသင့်သည့်အချက်မှာ နေထိုင်ရန် နေရာအလုံအလောက် လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးအများဆုံး လှောင်အိမ်မှာ အောက်ခြေနက်သော လှောင်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
– သူတို့၏သားမွေးနှင့် ခြေသည်းများကို သေချာဂရုစိုက်ပါ။ သူတို့၏သားမွေးများ မြေနှင့်ထိသောအခါတွင် ပုံမှန်ဖြတ်ညှပ်သင့်ပါတယ်။ အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နွေရာသီတွင် သားမွှေးရှည်များကို ပိုမိုညှပ်နိုင်ပါတယ်။ အနံ့ရှိလျှင် သင်၏ ပူးကို ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် မလိုအပ်ပါဘူး။ အမွေးရှည်ပါက ၃ ရက်တစ်ကြိမ် ရေချိုးပေးပြီးတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များက ၎င်းတို့၏လက်သည်းများကို ၄-၆ ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ညှပ်ရန် အကြံပြုထားပါတယ်။
– ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ပူးတွေဟာ အစားအသောက်မှားကျွေးတဲ့အတွက် မကြာခဏ ဖျားနာပြီး သေဆုံးတတ်ပါတယ်။ ပူးများဟာ အလွန်အားနည်းပါတယ် ။ ၎င်းတို့၏ အစားအစာ၏ 80% သည် မြက်ပင်ဖြစ်သင့်ပြီး လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက်များ အများအပြားစားခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော ဗီတာမင်စီ ရရှိစေပါတယ်။ သောက်သုံးရေကို လွယ်ကူပြီး အဆက်မပြတ် ရရှိစေရပါမယ်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြခဲ့သော အမှားများကို ပြုပြင်ပြီး သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံဉာဏ်ကို ခံယူခြင်းဖြင့် သူတို့မည်ကဲ့သို့ သက်သာလာသည်ကို သင် တွေ့နိုင်မယ်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ တခြားသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အမှားတွေ လုပ်ဖူးပါလား ?? အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြခဲ့ပါ။
သတိပြုရန် – ဤဆောင်းပါးကို ရင်းမြစ်အကြောင်းအရာနှင့် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိစေရန် 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုပြင်မွှမ်းမံထားပါတယ်
24 ဧကကျယ်ဝန်းသော မွေးမြူရေးခြံကို ပျားဘေးမဲ့တောအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်နေသည့် Morgan Freeman